စက်တပ် linear actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် Actuator > စက်တပ် linear actuator
စက်တပ် linear actuator
AOX-L ကို ကို စီးရီး စက်တပ် lတွင်ear actuaသို့r ဖြစ် သငျ့လျြောသော ဘို့ ပြောင်းလဲပစ် နှင့် Open-နီးစပ် တာဝန် ၏ ထိန်းချုပ်မှု နှင့် ဖြစ်စဉ် နည်းပညာ သို့ ခှဲစိတျကုသ ထိန်းချုပ်မှု valves.Sတွင်ce 1997, AOX ရှိပါတယ် လုပ် တိုင်း efဘို့t သို့ ပို့ အဆိုပါ အမြင့်ဆုံး အရည်အသွေး AOX-L ကို ကို စီးရီး စက်တပ် lတွင်ear actuaသို့r နှင့် န်ဆောင်မှုများ ဘို့ ကျွန်တော်တို့၏ cusသို့mers.Through အသစ်တီထွင်ပြုလုပ်သော စီမံခန့်ခွဲမှု, နည်းပညာ တိုးတက်ရေး နှင့် လူ့ resကျွန်တော်တို့၏ces စီမံခန့်ခွဲမှု, ကျွန်တော်တို့ လိမ့်မည် ကြိုးစား သို့ ခဲ နှင့် မြှင့်တင်ရန် အဆိုပါ တိုးတက်ရေး ၏ အဆိုပါ တွင်dustry.We မျှော်လင့်ထား သို့ ဖြစ် yကျွန်တော်တို့၏ ရှည်လျားသော သက်တမ်း မိတ်ဖက် တွင် Chတွင်a.
1 ။ AOX-L ကိုစီးရီးစက်တပ် linear actuator အဘို့အ Terminal နှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု
တစ်ဦးအတွက် Installed နွေဦးကိုယ့်ကိုယ်ကို အသုံးပြု. သီးခြားလျှပ်စစ်ဝိုင်ယာကြိုးအခန်းထဲက - type ကို terminal ကိုကြံ့ခိုင်သေချာ နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော။
၏စကေးစားပွဲပေါ်မှာAOX-L ကိုစီးရီးစက်တပ် linear actuator ပိုသောလမ်းညွှန်လှံတံပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် စောငျ့ရှောကျဖို့အလိုလိုသိနှင့်အဆင်ပြေ။
3 ။ အဆိုပါ အဆို့ရှင်အနေအထားများခင်းကျင်းပြသ
actuator ရဲ့အဖွင့်သို့မဟုတ်ပိတ်ပွဲလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်း အဆို့ရှင်အနေအထားများအပြောင်းအလဲကြီးမားနံပါတ်များနှင့်အတူ LCD မျက်နှာပြင်ပေါ်ကို real-time display ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဝင်းခြံ : IP67, NEMA4 နဲ့ 6
ပိတ် 2A ပွင့်လင်း / SPDT, 250VAC 10A
auxiliary န့်သတ်ချက် ပွောငျးလဲ
ဆုံးရှုံး ဘေးကင်းလုံခြုံ /
တီကောင်အားဖြင့် self-သော့ခတ် နှင့်တီကောင်ဂီယာ
2 ပြင်ပ ချိန်ညှိအဆို့
သံမဏိ, လူမီနီယမ် အလွိုင်း, လူမီနီယမ်ကြေးဝါ, Polycarbonate
AOX-L ကို စီးရီး
အချိုးအစားကိုထိန်းချုပ်ယူနစ် (ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြမှု 4-20mA, DC / 1-5V / 1-10V)
ဒေသခံထိန်းချုပ်ရေးယူနစ် (ဒေသခံထိန်းချုပ်ရေး ပွင့်လင်း / ရပ်တန့် / နီးကပ် optional ကို switch ကိုဒေသခံ / ဝေးလံခေါင်သီ switch သည်)
လျှပ်စစ်သံလိုက်ထိန်းချုပ်မှု reverse နှင့် ဂီယာပေါင်းစည်းမော်တာ starter
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြီးပြည့်စုံရှိပါတယ် နှင့်တင်းကျပ်သောပြင်ပကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်။ စီမံခန့်ခွဲမှုစံနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများ, အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပြင်ပပေးသွင်းဝယ်ယူ, ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၏ဖြစ်ပျက်မှုကာကွယ်တားဆီးဖို့လုံခြုံပြီးတည်ငြိမ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအသင်းတည်ထောင်ရန် ယာဉ်မတော်တဆမှုသို့မဟုတ်ကုန်ကြမ်းအနေနဲ့ Outsourcing ၏အကြောင်းပြချက်များအတွက်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးထိခိုက်စေ ပစ္စည်းများ, အစိတ်အပိုင်းများနှင့် equipment.It ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-L ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ကူညီပေးပါမည် စီးရီး linear actuator စက်တပ်။
ur ကုမ္ပဏီကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းရယူထားပြီး IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-သက်သေပြ, စသည်တို့ကိုအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အပြည့်အဝလိုက်နာကြောင်းပြသရာ နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် AOX-L ၏အရည်အသွေး စီးရီးစက်တပ် linear actuator အာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။
မေး: ငါတို့သည်သင်တို့၏ AOX-L ကိုအပေါ်ပုံနှိပ်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုဂိုသို့မဟုတ် comany နာမကိုအမှီရှိနိုင်ပါသည် စီးရီးစက်တပ် linear actuator သို့မဟုတ် package?
တစ်ဦးက : သေချာတာပေါ့။ သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်စတစ်ကာဖြင့်သင့်ထုတ်ကုန်အပေါ်ပုံနှိပ်နိုငျသညျ။
မည်သို့ AOX-L အကြောင်းကိုငွေပေးချေသို့မဟုတ်အခြားပြဿနာ၏အကြောင်းမေးခွန်း စီးရီး linear actuator စက်တပ်:
တစ်ဦးက : Pls ငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ငါနှင့်အတူအ chat ။
မေး: နိုင်ငံများတွင်သင့်ရဲ့ AOX-L ကိုစီးရီးစက်တပ်ထားသည့် linear actuator ရောင်းချ?
A: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဥရောပ, အမေရိကန်တင်ပို့နေကြတယ်, အရှေ့တောင်အာရှ, ရုရှားနှင့်အာဖရိက, ကျော်နိုင်ငံပေါင်း 30 ကျော်ပြန့်ပွားခြင်းနှင့် ကမ်ဘာပျေါတှငျဒေသများ။
hot Tags:: စက်တပ် linear actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်